26 taona no voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny kaomisaria Isotry ny
26 septambra teo teny 67ha CENAM iny resaka fanendahana. Ny alakamisy teo tokony ho tamin’ny 12 ora atoandro dia nanenjika vehivavy iray niaraka tamin’ny sabatra ny lehilahy iray.
Tsy nahazo na inona na inona izy tamin’izay fa nitsoaka nanavo-batana ilay vehivavy ary niditra tao anaty toeram-pisakafoanana «gargotte» iray teny an-toerana. Nitsofoka tao ihany koa ilay mpanendaka ka nampihorohoro ny olona tao. Niantso ny polisy avy hatrany ireo olona tao amin’ny fivarotan-tsakafo masaka. Nirifatra nitsoaka anefa ilay lehilahy nitana antsy ka tamin’ny telo ora tolakandro vao hitan’ireo polisin’ny CSP4 nihaodihaody teny amin’ny faritry 67 ha ary dia nosamborina avy hatrany .
Nandritra ny fisamboran’ny polisy dia nanamafy ireo mponina eny an-toerana fa ity lehilahy ity no anisan’ny tompon’antoka amin’ny fanendahana eny an-toerana. Efa nigadra teny Antanimora tamin’io resaka fanendahana io hatrany moa ity farany. Nofonjaina ny zoma teo mandra-pahatonga ny fotoam-pitsarana azy ity mpanendaka mitam-piadiana ity.